नेपाली सेनाको नक्कली पत्र देखाउँदै ठगी गर्दै – Radio Roshi
नेपाली सेनाको नक्कली पत्र देखाउँदै ठगी गर्दै
in अपराध — by Roshikhabar —	June 14, 2020
‘सेनाको मान्छे हुँ, सस्तोमा राशन सामान उपलब्ध गराइदिन्छुु भनेर ठगी गर्ने गिरोहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले पक्राउ गरेको छ । ठगीको आरोपमा पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ४ बाट चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेका प्रमुख रविकुमार पौडेलका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ३१ वर्षीय केवल राई सुनुवार, वडा न ५ बस्ने २४ वर्षीय रामबहादुर तामाङ, वडा न. ४ बस्ने ३७ वर्षीय भीम माहाजु र तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिका १२ बस्ने ४८ वर्षीय अमर अधिकारी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकामध्ये मुख्य योजनाकार भीम महाजू रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनकै योजना र निर्देशन बमोजिम अन्य व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ । उनले आफू सेनाको कर्णेल हुँ भनी पीडितसँग फोनमा कुरा गर्ने गरेका थिए । भने अन्यले महाजूको निर्देशनमा काम गर्ने गर्थे ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले जेठ २८ गते धुलिखेल नगरपालिका वडा नं। ८ थाक्लेमा होटल व्यवसाय गरी बस्ने चन्द्रकुमार लामालाई म विष्णुदल गण धुलिखेलमा कार्यरत नेपाली सेनाको क्याप्टेन हुँ हामीसँग स्टोरमा रहेका सामानहरू चामल, चिनी, तेल, बियर, नुन तपाईंलाई सस्तोमा मिलाइदिन्छु भन्दै पाँच लाख ६९ हजार २१० रुपियाँ मागेका थिए । तर लामाले सामान नदिई सामान नलिने बताएपछि उनीहरूले आधा रकम दिएमा मात्र सामान ल्याउने भन्दै विश्वास दिलाएर दुई लाख ५० हजार रकम र उनको स्कुटर लगेका थिए ।
उनीहरूले विष्णुदल गण ब्यारेक धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोक रासन स्टोर विभागको नक्कली पत्र देखाउने गरेका थिए । उनीहरू नगद र स्कुटर लिएर फरार भएपछि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलिखेलमा निवदेन दिएका थिए । उनीहरूलाई ठगीसम्बन्धी कसूुरअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । –गोरखापत्र अनलाईनबाट